Indigenous Peoples Rights In Pakzaang Village, Tedim Township, Chin State.
19/04/2020 - by admin - LeaveaComment
“ပတ်ဇန်ရွာတွင် ဌာနေတိုင်းရင်းသား အမြင်ဖွင့်သင်တန်းပေးခြင်း” Living Water Organization မှ ပြုလုပ်လျက်ရှိသော ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ အမြင်ဖွင့်ခြင်း နှင့် သုသေသန အစီအစဉ်အားချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ်မှ ပတ်ဇန်ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။သင်တန်းအတွင်း ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးအပြင်၊ အခြားသိသင့် သိထိုက်သည့် ကဏ္ဍများအားထည့်သွင်း ဝေမျှခဲ့သည်။ ဤအစီအစဉ်သည် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအသိပညာပေးခြင်းအပြင် သုတေသနပြုလုပ်သည့် အစီအစဉ်လဲ ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ရွာသူ ရွာသးများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံမေးမြန်းကာ …
Indigenous Peoples Rights In Phai Sat Village, Cikha, Chin State.
“ဖိုင်ဆတ်ရွာတွင် ဌာနေတိုင်းရင်းသား အမြင်ဖွင့်သင်တန်းပေးခြင်း” Living Water Organization မှ ပြုလုပ်လျက်ရှိသော ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ အမြင်ဖွင့်ခြင်း နှင့် သုသေသန အစီအစဉ်အားချင်းပြည်နယ် ကျီခါးမြို့မှ ဖိုင်ဆတ်ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းအတွင်း ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးအပြင်၊ အခြားသိသင့် သိထိုက်သည့် ကဏ္ဍများအားထည့်သွင်း ဝေမျှခဲ့သည်။ ဤအစီအစဉ်သည် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအသိပညာပေးခြင်းအပြင် သုတေသနပြုလုပ်သည့် အစီအစဉ်လဲ ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ရွာသူ ရွာသးများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး …
Indigenous Peoples Rights In Suang Hoih Village, Cikha, Chin State.
ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ သိသင့်သိထိုက်သည့် အကြောင်းခြင်းရာများ ဝေမျှပို့ချခြင်းနှင့် သုတေသနအစီအစဥ်တစိတ်တပိုင်းအနေဖြင့် ဆွောင်းဟွေ့ကျေးရွာကျီခါးမြို့နယ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖက်ဒရာယ်တည်ဆောက်ရေးအားအထောက်အကူပြုရန်ရည်ရွယ်သည့် ဤအစီအစဥ်အတွက် ဆွောင်းဟွေ့ရွာသည် ၂၂ရွာမြောက်ဖြစ်ပြီးမျှော်မှန်းကျေးရွာအရည်အတွက်ပြည့်မှီပါက တွေ့ရှိချက်များ အား သုတေသနစာတမ်းအဖြစ် စာအုပ်ထုတ်ဝေကာ နယ်မြေခံ လူထုခေါင်းဆောင်များ..ဒေသန္တရအစိုးရများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများထံတင်သွင်းဝေငှသွားရန်ရည်ရွယ်သည်။
Indigenous Peoples Rights In Vanglai Village, Cikha, Chin State.
19/04/2020 19/04/2020 - by admin - LeaveaComment
Living Water Organization မှပြုလုပ်လျက်ရှိသောဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးအမြင်ဖွင့်သင်တန်းနှင့်သုတေသနအစီအစဥ်အား ၂၁ရွာမြောက်အဖြစ်ကျီခါးမြို့နယ်၊ ဗန်းလိုင်ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအစီအစဥ်သည် မြန်မာပြည်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖက်ဒရာယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအားအထောက်အကူဖြစ်စေရန် ပံ့ပိုးသည့်အစီအစဥ်ဖြစ်ကာရေတို၊ ရေရှည် ရည်မှန်းချက်များထားရှိကာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းတခုလည်းဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းပြီးမြောက်ပါက သုတေသနစာတမ်းအဖြစ်တွေ့ရှိချက်များအား စာတမ်းပြုစုကာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအမှီ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဝန်ကြီးများနှင့် အစိုးရဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များထံတင်သွင်းတင်ပြရန် ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိပါသည်။
Indigenous Peoples Rights In Gamlai Village, Tedim Township, Chin State.
13/08/2019 19/04/2020 - by admin - LeaveaComment
“ဆေးပေးခန်းလိုအပ်နေသည့် ဂမ်လိုင်ရွာ” ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအား အသိပညာပေးကာ စွမ်းရည်မြင့်တင်ခြင်းနှင့် သုသေသနပြုလုပ်ခြင်းစီမံကိန်း၏ တစိတ်တဒေသအနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ်အတွင်းရှိဂမ်လိုင်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ကာသင်တန်းနှင့်သုသေသနပြုလုပ်ခြင်းအား လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သင်တန်းအတွင်း ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးနှင့်ဖက်ဒရာယ်ရေးရာများ၊ မြေယာနှင့်သစ်တောဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်နှီးနွယ်အသိပညာများအား ပို့ချခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ကျေးရွာ၏အနာဂတ်တွင်တွေ့ကြုံလာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့်ကိစ္စရပ်များအပေါ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းအားလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤသင်တန်းသည်Living Water Organizationမှ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် သုသေသနပြုလုပ်ခြင်း ၏ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်ပြီး စီမံချက်ပြီးဆုံးပါက ရရှိလာသည့် ရလဒ်များအားသက်ဆိုင်ရာ …
Indigenous Peoples Rights In Anlangh Village, Tedim Township, Chin State.
“မဏိပူရမြစ်ကူးတံတားသစ်လိုအပ်နေသည့် အန်းလန့်ရွာ” ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအား အသိပညာပေးကာ စွမ်းရည်မြင့်တင်ခြင်းနှင့် သုသေသနပြုလုပ်ခြင်းစီမံကိန်း၏ တစိတ်တဒေသအနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ်အတွင်းရှိအန်းလန့်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ကာသင်တန်းနှင့်သုသေသနပြုလုပ်ခြင်းအား လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သင်တန်းအတွင်း ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးနှင့်ဖက်ဒရာယ်ရေးရာများ၊ မြေယာနှင့်သစ်တောဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်နှီးနွယ်အသိပညာများအား ပို့ချခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ကျေးရွာ၏အနာဂတ်တွင်တွေ့ကြုံလာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့်ကိစ္စရပ်များအပေါ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းအားလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤသင်တန်းသည်Living Water Organizationမှ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် သုသေသနပြုလုပ်ခြင်း ၏ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်ပြီး စီမံချက်ပြီးဆုံးပါက ရရှိလာသည့် ရလဒ်များအားသက်ဆိုင်ရာ …
Indigenous Peoples Rights In Tuipi Village, Tedim Township, Chin State.
“ကားလမ်းမပေါက်သေးသော တွီးပီးရွာ” ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအား အသိပညာပေးကာ စွမ်းရည်မြင့်တင်ခြင်းနှင့် သုသေသနပြုလုပ်ခြင်းစီမံကိန်း၏ တစိတ်တဒေသအနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ်အတွင်းရှိတွီးပီးကျေးရွာသို့ သွားရောက်ကာသင်တန်းနှင့်သုသေသနပြုလုပ်ခြင်းအား လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သင်တန်းအတွင်း ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးနှင့်ဖက်ဒရာယ်ရေးရာများ၊ မြေယာနှင့်သစ်တောဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်နှီးနွယ်အသိပညာများအား ပို့ချခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ကျေးရွာ၏အနာဂတ်တွင်တွေ့ကြုံလာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့်ကိစ္စရပ်များအပေါ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းအားလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤသင်တန်းသည်Living Water Organizationမှ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် သုသေသနပြုလုပ်ခြင်း ၏ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်ပြီး စီမံချက်ပြီးဆုံးပါက ရရှိလာသည့် ရလဒ်များအားသက်ဆိုင်ရာ …
Indigenous Peoples Rights In Pangzang Village, Tedim Township, Chin State.
“ကားလမ်းလိုအပ်နေသော ပန်ဇန်ရွာ” ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအား အသိပညာပေးကာ စွမ်းရည်မြင့်တင်ခြင်းနှင့် သုသေသနပြုလုပ်ခြင်းစီမံကိန်း၏ တစိတ်တဒေသအနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ်အတွင်းရှိပန်ဇန်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ကာသင်တန်းနှင့်သုသေသနပြုလုပ်ခြင်းအား လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သင်တန်းအတွင်း ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးနှင့်ဖက်ဒရာယ်ရေးရာများ၊ မြေယာနှင့်သစ်တောဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်နှီးနွယ်အသိပညာများအား ပို့ချခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ကျေးရွာ၏အနာဂတ်တွင်တွေ့ကြုံလာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့်ကိစ္စရပ်များအပေါ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းအားလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤသင်တန်းသည်Living Water Organizationမှ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် သုသေသနပြုလုပ်ခြင်း ၏ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်ပြီး စီမံချက်ပြီးဆုံးပါက ရရှိလာသည့် ရလဒ်များအားသက်ဆိုင်ရာ …
Indigenous Peoples Rights In Mauvom Village, Cikha, Chin State.
“လျှပ်စစ်မီးလိုအပ်နေသော မောင်ဝေါမ်ရွာ” ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအား အသိပညာပေးကာ စွမ်းရည်မြင့်တင်ခြင်းနှင့် သုသေသနပြုလုပ်ခြင်းစီမံကိန်း၏ တစိတ်တဒေသအနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်၊ ကျီခါးမြို့နယ်အတွင်းရှိမောင်ဝေါမ်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ကာသင်တန်းနှင့်သုသေသနပြုလုပ်ခြင်းအား လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သင်တန်းအတွင်း ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးနှင့်ဖက်ဒရာယ်ရေးရာများ၊ မြေယာနှင့်သစ်တောဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်နှီးနွယ်အသိပညာများအား ပို့ချခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ကျေးရွာ၏အနာဂတ်တွင်တွေ့ကြုံလာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့်ကိစ္စရပ်များအပေါ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းအားလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤသင်တန်းသည်Living Water Organizationမှ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် သုသေသနပြုလုပ်ခြင်း ၏ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်ပြီး စီမံချက်ပြီးဆုံးပါက ရရှိလာသည့် ရလဒ်များအားသက်ဆိုင်ရာ …
Indigenous Peoples Rights In Vaivet Village, Cikha, Chin State.
“ဆေးပေးခန်းလိုအပ်နေသော ဗိုင်ဗက်ရွာ” ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအား အသိပညာပေးကာ စွမ်းရည်မြင့်တင်ခြင်းနှင့် သုသေသနပြုလုပ်ခြင်းစီမံကိန်း၏ တစိတ်တဒေသအနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်၊ ကျီခါးမြို့နယ်အတွင်းရှိဗိုင်ဗက်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ကာသင်တန်းနှင့်သုသေသနပြုလုပ်ခြင်းအား လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သင်တန်းအတွင်း ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးနှင့်ဖက်ဒရာယ်ရေးရာများ၊ မြေယာနှင့်သစ်တောဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်နှီးနွယ်အသိပညာများအား ပို့ချခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ကျေးရွာ၏အနာဂတ်တွင်တွေ့ကြုံလာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့်ကိစ္စရပ်များအပေါ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းအားလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤသင်တန်းသည်Living Water Organizationမှ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် သုသေသနပြုလုပ်ခြင်း ၏ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်ပြီး စီမံချက်ပြီးဆုံးပါက ရရှိလာသည့် ရလဒ်များအားသက်ဆိုင်ရာ …
မိမိတို့ သက်စမ်းရေလူမှုဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ အနေဖြင့် အောက်ပါ အကြောင်းအရာများအား တန်ဖိုးထား ယုံကြည်သည်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် တဦးတယောက်ကောင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ရသည် မဟုတ်ပဲ အများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာ ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ရရှိနိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
မတူကွဲပြားမှု- မတူကွဲပြားခြားနားမှုသည် အငြင်းပွားဖွယ်မဟုတ်ပဲ ခြားနားသောအကြောင်းအရာများထဲမှ အကောင်းဆုံးသော ရလဒ်များထွက်ပေါ်လာသည်ဟု ယုံကြည်သည်။
တန်းတူညီမျှမှု- လူသားအားလုံး မည်သည့်အသားအရောင်၊ ယုံကြည်မှု နှင့် လိင်ကွဲပြားမှုရှိနေပါစေ တန်းတူညီမျှသည်ဟု မိမိတို့ယုံကြည်သည်။
Living Water Community Development Organization
Total Users : 17510
Total views : 51442
Living Water Organization is Non Government Organization base in Kalaymyo, Sagaing, Myanmar. And the Organization aim to promote the integrated Social and Environmental development, among indigenous people and diverse Religious and Ethnicity.
No.71(C) Taungzalat st,
Thazin2Ward Kalaymyo,
+95 9253 728 673
Copyright © 2016 Living Water Community Development Organization.